Fanaovana politika Voasarika ny tanora
Antenimieram-pirenena Ho raikitra ny totohondry anio …
Ahiana ny savorovoro goavana eny amin’ny antenimieram-pirenena Tsimbazaza anio. Nanizingizina ny praiminisitra Solonandrasana omaly fa tsy maintsy holaniana anio talata 20 martsa ny volavolan-dalàna momba ny fifidianana mba hanajana ny tetiandro.
Fifidianana filoha Tsy sahy indray i Orlando Robimanana ?
Manomboka miova ny tsiokan’ny rivotra politika eto amin’ny firenena tato anatin’ny fotoana fohy. Nangina sy tsy re feo intsony i Marc Ravalomanana tato ho ato.
Andro iraisam-pirenena ho an`ny Frankofonia Handray ny RECEF i Madagasikara
Isaky ny 20 martsa no fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an`ny Frankofonia maneran-tany.
Volavolan-dalàna momba ny ZES Nolavin’ny antenimieram-pirenena
Nidona tamin’ny rindrina ilay volavolan-dalàna momba ny faritra ara-toekarena manokana na Zone Economique Spéciale (ZES) mahafatifaty ny fitondrana HVM satria dia tsy lany teo anivon’ny antenimieram-pirenena omaly. Solombavambahoaka 46 no nitsipaka raha 40 nanaiky.
Miha mahasarika ireo tanora avara-pianarana amin�izao fotoana izao ny fanaovana politika sy ny resaka manodidina azy.
Tanora vitsivitsy nanaraka adihevitra politika tetsy Ampandrana, omaly, no indro maneho ny heviny.
Julie Odile, mpianatra haifiarahamonina
Ankehitriny ny tanora dia efa tokony hanapa-kevitra amin’ny hoavin’ny firenena sy ny tsirairay. Tokony handray fanapaha-kevitra ho vonona hiatrika ny asa ny tanora ankehitriny. Tsara raha miditra an-tsehatra ao anatin’ny raharaha politika ny tanora ary manadihady ary miasa. Izany hoe, mandray anjara sy mitarika ny tanora namana handray anjara ihany koa.
Heriniaina Randriamalala, mpandrindra fandaharan’asa ho an’ny tanora
Amin’izao fotoana izao isika dia miaina ao anaty kihon-dalana lehibe ahafahana milaza fa ny tanora no mandray an-tanana ny zavatra rehetra izay tokony hatao eto amin’izao tontolo izao satria ny 2/3-n’ny mponina eto an-tany dia tanora avokoa. Ny famoronana rehetra eto dia saika tanora avokoa no nanao azy, ny fihavaozana rehetra ihany koa ary kelikely eo dia ho tanora avokoa ny mpitondra. Miha mahita aho fa betsaka ny tanora manana fomba fijery haitarika na “sens de leadership” ary tena mandray anjara amin’ny tandrify azy any amin’ny fiarahamonina misy azy avy. Ny lesoka fotsiny dia marefo ny fananana an’izay amin’ny tontolo politika. Ahoana no ahafahan’ny tanora manapa-kevitra ho amin’ny hoaviny ?
Erik Randriarimalala, filohana fikambanana
Vitsy ny mpisehatra politika tena nandalo tamina fiofanana ara-politika dia lasa mivaona ka tonga amin’ilay hoe politika politisianina no hita eto. Ny mpisehatra politika izany, indrindra ny tanora, dia tsara raha mba mandalo fiofanana mikasika izay farafaharatsiny. Ny andraikitra andrasana dia ny fandraisana anjaran’ny tanora eo amin’ny resaka fikarohana amin’izay lafiny izay. Ny fidirana anatina fikambanana no fandraisana andraikitra voalohany indrindra.